Ialy sy Iris : 60.000Ar no niaingany …lasa miserasera any ivelany amin’izao
Inona no atao raha te ho mpanao gazety?
Azo lazaina ho isan’ireo asa tena mafy ny fanaovan-gazety. Ny tena hataon’ny mpanao gazety mantsy dia mikaroka sy manamarina ny zava-misy mba ho zaraina amin’ny mpanara-baovao.
Te ho “mannequin” : Inona avy no atao?
Sady asa no fialam-boly ny asan’ny mpilatro. Tombony lehibe azon’ireo tanora amin’izany ny fifaneraserana amin’ny karazan’olona samihafa.
“Esthéticienne” : ny fahaizana misariaka sy mandray olona no tena ilaina
Asa tena mahafinaritra ny fikarakarana endrika amam-bika. Amin’ny ankapobeny dia mifototra amin’ny fikarakarana ny hoditra sy fanomezana torohevitra ho an’ireo
“Psychologue” : asa mifotora amin’ny fahaizana mihaino ny hafa
Sekoly ambony iray ihany no mbola mamoaka « psychologues » eto Madagasikara.
Ireo fianarana arahina raha te ho “chefs cuisiniers”
Sady asa no zavatra ankafizina ny asan’ny “chefs cuisiniers”. Azo lazaina ho ara mihitsy ity asa fikarakarana sakafo ity.
Hotesse de l’air… asa nofinofisin’ny ankizivavikely
Nofinofin’ny ankizivavikely rehetra izany ho lasa mpanamory ara-barotra izany. Asa mafy kanefa tena ahitana tombontsoa toy ny fitetezana toerana samihafa izany. Ny fahaizana tenim-pirenea no tena ilaina voalohany amin’izany. Toetra tokony hanana kosa ny fahaizana misariaka sy ny hamafisan-tsaina.
Mionja, Chic by Fabiola : « Mpivarotra yaourt no niantombohako…»
Raha vao miteny hoe, Chic By Fabiola dia rtoa Mionja avy hatrany no ao an-tsain’ny maro. Tsy tongatonga tamin’izany toerana izany anefa izy, raha niresadresaka taminay fa nandalo sedra maro ary niady mafy tamin’ny fiainana. Nambarany fa ny fikirizana sy risi-po tsy hanaiky ho resin’ny fiainana ary indrindra ny fitahian’Andriamanitra no isan’ireo lakile nahatafita azy. Zarainy amin’ireo mpamaky Jejoo anio izany…
Mpirahavavy kambana i Ialy sy Iris. Toy ny iray ihany izy roa, na eo amin’ny sehatry ny asa aza. Nanangana orinasa mivarotra amin’ny aterineto izy roa vavy ao anaty “Facebook”.
Miroborobo izany orinasa izany amin’izao fotoana ary mbola mieritreritra ny hanitatra izany aza izy roa vavy. Mizara ny niandohany izy ireo, ny tsiambaratelon’ny fahombiazany sy ny sedra nolalovanin’izy ireo.
Jejoo : Mba zarao aminay ny niandohanareo
Ialy sy Iris : Fitiavana lamaody no niantombohanay ary hitanay fa somary “coincé” ny eto Madagasikara raha resaka lamaody. Voatenin’ny olona foana izahay tamin’izany, tamin’ny fomba fiakanjo : mahasahisahy loatra, tsy any an-dafy isika… misy mihitsy aza ny nanendrikendrika anay ho mivaro-tena, saingy tsy nampihemotra anay izany fa vao mainka aza nataonay ho tohatra fiakarana sy hiezahana hanao zavatra tsara foana. Nanohana anay foana koa ny ray aman-dreninay, dia lasa hery lehibe ho anay ilay izy. Tany amin’ny taona 2015 tany izahay no nanomboka nivarotra tamin’ny aterineto. Mbola nalefa tany anaty “groupe” ireny ilay izy, tamin’izany. Nanao “hôtesse” izahay taloha dia nahazo karama, ka iny karama iny no niantombohanay. Nisy olona nanoro hevitra anay ny amin’ny hidirana amin’ny varotra amin’ny aterineto, izay isan’ny nanosika anay hanao ilay izy. Niainga tamin’ny vola 30.000 Ar tsirairay izahay roa. Tsy mba nindram-bola tany amin’ny banky mihitsy izahay fa niainga tamin’ny kely teo am-pelan-tanana ary nifofotra mafy vao tonga tamin’izao toerana nisy anay izao.
Jejoo : Avy aiza ilay fitiavana lamaody ka nahatonga anareo hifantoka amin’io asa io ?
Ialy sy Iris : Toa an’i neninay dia tena tia miantsena izahay. Tia mitsongoloka, hoy ny fiteny, na hijery lamaody fotsiny aza. Izy rahateo efa nampiaiky ny maro ny fahaizany misafidy ny akanjo anaovany sy manamboatra izany mba hifanaraka aminy, dia nifindra ho azy taty aminay ilay izy. Tany am-boalohany, teto ihany izahay no nijery entana, fa amin’izao efa manomboka manafatra any Frantsa, sy Maorisy. Efa manomboka manokatra ny orinasanay any Frantsa izahay no sady mampiditra entana ihany koa. Hisy marika alemana vaovao mbola tsy misy mpanana mihitsy, ho hafarana hiditra eto Madagasikara atsy ho atsy.
Jejoo : Inona no sedra goavana tena nolalovanareo
Ialy sy Iris : Ny tsy fisian’ny entana ! Nanana tombony anefa izahay satria tsy mba nanary anay mihitsy ireo mpamatsy anay. Ny ankabeazan’ireo mpamoaka entana koa efa nahafantatra anay, dia mamela entana ho anay foana izy ireo. Tsy tena mitovy amin’ireo mpivarotra amin’ny aterineto hafa, fa fitahiana avy any amin’i Jesosy foana ny anay no mampizotra tsara ny asa rehetra. Nisy fotoana, tsy maintsy nampiakatra vidin’entana izahay satria niakatra be mihitsy ny vidin’entana tany Eoropa. Miezaka mitazona ny vidin’ny entana anefa izahay mba hitazonana ireo mpanjifa. Efa misy hatrany Frantsa, Alemana, Maorisy, Belzika, Seychelles, Etazonia ireo mpanjifa ao amin’ireo pejy miisa telo hiasanay : pejy ho an’ny lehilahy, ho an’ny ankizy sy ho an’ny vehivavy. Ankoatra ireo dia mbola manana pejy mahakasika ny “maquillage” izahay.
Jejoo : Misy tetikasa hafa efa eritreretinareo ve ?
Ialy sy Iris : Manana eritreritra ny hanangana pejy momba ny fanaingoana trano izahay, eo ihany koa ny “restauration” izay hanaterana sakafo ho an’ireo olona tsy afaka mivoaka ao an-trano na mamonjy toeram-pisakafoana. Mbola hisy koa ny fanofana fitaovana fampandihizana. Mieritreritra ny hanitatra ny toerana hiasana izahay, noho ireo tetikasa be dia be ireo.
Jejoo : Ohatrinona eo ho eo ny vola mihodina ao anatin’ny orinasanareo?
Ialy sy Iris : Raha isa-kerinandro dia manodidina ny 20 tapitrisa Ariary eo ho eo, arakaraky ny “arrivage”. Efa misy eo amin’ny 3 tapitrisa teo izao no mpanjifa nividy taminay fa tsy voaisa. Ireo mpanjifa efa mpanaraka anay kosa no anananay “base de donnée”.
Jejoo : Manoloana ny asa be dia be ataonareo, inona no fialambolinareo ?
Ialy sy Iris : Tsy misy (hehy). Betsaka ny asa dia tsy mahatombina mihitsy ny saina raha vao tsy mandray anjara manampy ny ekipa. Fa rehefa tsy miasa dia misakafo, mijery fahitalavitra, dia mihira.
Jejoo : Manao régime manokana ve ianareo ?
Ialy sy Iris : Tsy manao régime mampahia izahay, tsy mifady sakafo ihany koa. Rehefa avy mihinana matsiro fotsiny dia manadio ny any anaty any. Tsy manao fanatanjahantena be akory aza fa ny “rythme” ato amin’ny orinasa h enjana be.
Jejoo : Ary inona no akora ampiasainareo hikoloana endrika ?
Ialy sy Iris : Diloilo kôkô. Indraindray mampiasa L’Oréal fa tsy matetika akory. Tsy mividy zavatra lafo hikarakarana tarehy izahay.
Mifototra amin’ny finoana ny firoboroboan’ny orinasa izay sahanin’i Ialy sy Iris miaraka amin’ireo ray aman-dreniny sy ny anadahiny. Ary isan’ny hafatra fototra ampitain’izy ireo amin’izay maniry ny hanatratra tanjona ny fikirizana ao anatin’ny finoana.